Kuthetha ukuthini ukuphupha kuqhushumbo? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Xa into iqhuma, ihlala inika imvakalelo embi kwaye ihlala ibangela uloyiko kuye wonke umntu. Ukuphupha ngokudubula kuthetha ukuba impumelelo yomntu kunye neyakho iya kwenzeka ebomini bakho. Uya kuba namaxesha amaninzi onwabile kwaye olu hlobo lweemeko luhle kuwo wonke umntu.
Intsimi yothando ayizukudubula ngaphandle kwexesha, ke lixesha lokuba uzikhathalele. Kufanelekile ukuba ukhankanye ukuba iintloni zinokwenzeka kwaye kufuneka uzame ukunqanda ezi ntlobo zezinto. Inqaku eliphambili kukuzama ukusebenzisa amathuba ukuze yonke into isebenze ngcono.
1 Ukuphupha ngokudubula kubonisa ntoni?
2 Ukuphupha ubona ukuqhuma
3 Ukuphupha usiva ingxolo yokuqhushumba
4 Ukuphupha ngokudubula apho usesembindini
5 Ukuphupha ukuba ubangela ukuqhuma
6 Ukuphupha ukuba ukhubazekile kukuqhushumba
7 Iphupha Ngokubaleka Ukuqhuma
8 Ukuphupha ukuba uyafa kukuqhushumba
9 Ukuphupha uyazi ukuba uza kufa kuqhushumbo
10 Iphupha malunga nezinye iimveliso ziyaqhuma
11 Ukuphupha uMdlalo onogqabhuko-dubulo
12 Emva kwayo yonke loo nto, eli phupha libonisa ukuba loluphi utshintsho ...
Ukuphupha ngokudubula kubonisa ntoni?
Ngalo lonke ixesha kukho uhlobo oluthile lokuqhuma, iya kubonisa ukuba loluphi utshintsho oluza kwenzeka. Nokuba kulungile okanye kubi, oko kukuthi, yonke into iya kuxhomekeka kuwe kungabikho namnye umntu. Isimo esifanelekileyo kuwe asikokukhalaza xa yonke into itshintsha, kuba konke oku kuyimfuneko.
Ukwazi ngokuqinisekileyo intsingiselo yokuphupha kuqhushumbo, kuya kufuneka ukhumbule zonke iinkcukacha. Umxholo uya kufaneleka ukuba uqwalaselwe, ke lixesha lokuba ube nengqwalaselo eyimfuneko kuyo yonke le nto. Akukho nto ingcono kunokujonga iimeko eziqhelekileyo zolu hlobo lwamaphupha angezantsi.
Ukuphupha ubona ukuqhuma
Nokuba uzama ukukhupha iimvakalelo zakho, kodwa ayenziwa ngendlela eyiyo kwaye kuya kufuneka unike ingqalelo. Inqaku eliphambili kukuzama ukuthathela ingqalelo, ukubonakalisa kwaye emva koko izimo zengqondo ezithathiweyo ziya kuba ngcono. Kungcono ukuthatha eli thuba ufunde ngakumbi nangakumbi.
Ukuphupha usiva ingxolo yokuqhushumba
Ujongene nengxaki enkulu kwaye ngelishwa khange ube nayo impumelelo oyifunayo kakhulu. Lifikile ixesha lokuba utshintshe indlela ocinga ngayo, kuba ukuze iziphumo zahluke, kufuneka uyenze. Ukuqhubeka usenza izinto ezifanayo kuya kukusa kwindawo ongafuni ukuya kuyo kwakhona.
Ukuphupha ngokudubula apho usesembindini
Abanye abantu abanomona bayakukhathaza kwaye ngelishwa awuzange ube nezimo zengqondo ezifanelekileyo. Eli lixesha lokuyeka ukuba yinto kwaye isimo sengqondo sokusithatha kukuyeka ukondla yonke le nto. Xa uyeka ukujonga umbono, yonke into iya kutshintsha ngokuzenzekelayo ibengcono.
Ukuphupha ukuba ubangela ukuqhuma
Izigqibo zakho azichanekanga, kuba ukusebenza phantsi koxinzelelo akulunganga kwaye kuya kufuna ingqwalaselo enkulu. Zama ukucinga ngcono kwaye ukubonakalisa sisigqibo esifanelekileyo, kuba siyakwenza ukuba ungaphinde wenze iimpazamo. Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba kufanelekile kakhulu ukuba ube nokuqonda le mibuzo ibalulekileyo.
Ukuphupha ukuba ukhubazekile kukuqhushumba
Ukuqhuma kubonisa utshintsho kwaye ukuba unqunyulwe ephupheni, oko kuthetha ukuba izinto ziphucula kakhulu. Oko kuthetha ukuba yonke into ilungile kwaye iyakuphela iyisigqibo esiza kwenza umahluko kuye wonke umntu. Zama ukukuxabisa okutshintshileyo kwaye uzame ngawo onke amandla akho ukuba ungabuyeli kuwo wonke loo mxholo.
Iphupha Ngokubaleka Ukuqhuma
Umjikelo omtsha uya kwenzeka ebomini bakho kwaye ukuphupha kuqhushumbo apho usinda khona kungqina oko. Elo njongo unayo iya kufezekiswa kwaye ngaphezulu kwako konke iya kuyanelisa imfuno onayo. Kuhleli kuwe kuphela ukuba usebenzise eli thuba kwaye ulixabise ulwazi oluboniswe kwisicatshulwa.
Ukuphupha ukuba uyafa kukuqhushumba
Utshintsho alulunganga, ngakumbi umba oya kufuna ukhathalelo lomntu wonke. Imalunga nendlela obuqhubene ngayo nolu tshintsho lwenzeka ebomini bakho. Eyona nto inomdla kukuba uqaphele kwaye utshintshe okungahambi kakuhle.
Ukuphupha uyazi ukuba uza kufa kuqhushumbo
Ngelishwa, iindaba ezimbi zikulindile kwaye lixesha lokuba uzithathele ingqalelo. Ukuqhubeka nokubaleka ayizukuba yinto elungileyo, kuba kuya kukuzisela kuphela enye ingxaki, eqhubeka nokusebenza. Xa ujongene nayo, umphumo wokugqibela uya kuveliswa ngendlela enomdla ngakumbi.
Iphupha malunga nezinye iimveliso ziyaqhuma
Kusenokwenzeka ukuba ngexesha elifutshane, uya kuphoswa zizinto ozithandayo kakhulu. Kuqala kungabonakala kunzima, kodwa ekuhambeni kwexesha iya kuba sesona sigqibo sihle. Kuba iya kukwenza ufumane izinto ezintsha, oko kukuthi, ukuthanda, ukuzonwabisa kwaye ngaphezulu kwako konke ukuthanda.
Ukuphupha uMdlalo onogqabhuko-dubulo
Unqwenela utshintsho kwaye uphuphe uqhushumbo lubonisa ukuba kuya kufuneka usebenze nzima kwelo cala. Njengoko inzima ngokuvakalayo, eli lixesha lokuba uqale ngokutshintsha. Uloyiko oziva ulungile kwaye luya kukushiya ngaphandle kokufikelela kwiinjongo zakho.
Emva kwayo yonke loo nto, eli phupha libonisa ukuba loluphi utshintsho ...
Iya kuxhomekeka kwinto nganye, oko kukuthi, kwabanye ilungile kwaye kwelinye icala inokuba mbi. Inyani yile yokuba isiqingatha seglasi yamanzi phantse sigcwele abanye kwaye abanye bacinga ukuba ayinanto. Iphupha libonisa kuphela isidingo sokwazisa ngakumbi olu tshintsho. Kwaye ulonwabele iphupha lodubulo?